उपनिर्वाचनको अन्तिम नामावली सार्वजनिक, कहाँ कति जना उम्मेदवार ? — Imandarmedia.com
उपनिर्वाचनको अन्तिम नामावली सार्वजनिक, कहाँ कति जना उम्मेदवार ?
काठमाडौं । निवार्चन आयोगले आगामी मङ्सिर १४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको छ ।
कास्की प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कात्तिक २१ गते २२ जनाले मनोनयन दर्ता गरेका थिए । तर आइतबार स्वतन्त्र उम्मेदवार पुरुषोत्तम खनालले उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै सो क्षेत्रमा २१ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । जसमा १० जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् भने ११ जना राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा छन् ।
आयोगका अनुसार भक्तपुरको प्रदेश–१ को (क)मा ९ जना दलबाट र १० जना स्वतन्त्र गरी १९ जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । त्यसैगरी बाग्लङको प्रदेशसभामा ८ जना दलबाट र २ जना स्वतन्त्र गरी १० जना चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । त्यसैगरी, १४ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् जसमा १२ जना राजनीतिक दलबाट र २ स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका छन् ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिर १४ गते सम्पन्न हुन गइरहेको उपनिर्वाचनका लागि पार्टीको तयारीका लागि ‘अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समिति, उपनिर्वाचन–२०७६’ गठन गरेको छ ।
कांग्रेसले पार्टीको विधानबमोजिम स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित एवं भयरहित वातावरणमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्न आज सो समिति गठन गरेको पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
पार्टी केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक संयोजकत्वको समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरु सीता गुरुङ, नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, केन्द्रीय निर्वाचन समिति सदस्य अधिवक्ता सीताराम केसी, अधिवक्ता तेज रावल सदस्य छन् । समितिको सदस्य सचिवमा अधिवक्ता केशव रिजाल रहेको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।